१० अर्बको हिसाव खोज्दै देशैभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन | Hamro Najar
१० अर्बको हिसाव खोज्दै देशैभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं। सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईमा १० अर्व खर्च गरेको विवरण पारदर्शिता नहुँदा देशभर विरोध भईरहेको छ । देशभरका नागरिकले १० अर्ब के मा खर्च भयो ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । देश विदेशबाट आएका कोरोनाको संक्रमितलाई राख्नको लागि व्यवस्थित क्वरेन्टाईन पनि सरकारले बनाएको छैन , कसरी १० अर्व खर्च ? भयो आम नागरिकको प्रश्न छ ।आरडिटी किट बन्द गरेर पिसिआर किटले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, १० अर्बको खर्चको हिसाब देखाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन्।
देशमा लकडाउन भएको करिव ३ महिना पुग्न लागको छ । अहिले सम्म लकडाउनको पालना गरेर बसेका नागरिकले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । कोरोना विरुद्ध लड्न भनेर सरकारले १० अर्बको अनियमितता गरेको भन्दै आम नागरिक भ्रष्टाचार विरुद्धमा सडकमा आएका छन् । पारदर्शिता र सुशासनको माग गर्दै यूवाहरुको नेतृत्वमा देशैभर स्वतस्पूर्त सरकार बिरुद्ध प्रदर्शन शुरु भएको छ । सरकारले अहिले सम्म १० अर्बको हिसाव किताव नागरिलाई दिन सेकेको छैन् ।
यसै बिच सरकारविरुद्ध प्रदर्शन शुक्रबार पनि जारी छ । प्रदर्शनकारीले आज वसन्तपुरमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका हुन् । लकडाउनका बेला प्रदर्शन गरे पक्राउ गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनीलाई युवाहरुले बेवास्ता गरेका छन् । यतिबेला सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै देशभर आन्दोलन छ । प्रदर्शनकारीले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, आरडिटी किट बन्द गरेर पिसिआर किटले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, १० अर्बको खर्चको हिसाब देखाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन्।’
धनगढीमा युवाहरुले सरकारकाबिरुद्ध विरोध प्रर्दशन
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा युवाहरुले सरकारकाबिरुद्ध विरोध प्रर्दशन गरेका छन्। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको, कोरोना महामारीको उचित व्यवस्थापन नगरेको लगायतका विषयमा धनगढीका युवाले खबरदारी गरेका हुन्। धनगढीको ट्राफिक चौराहमा शुक्रबार दिउँसो त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मास्क वितरण गरेर प्रर्दशन शुरु गरिएको थियो। उक्त प्रर्दशनमा ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु प्लेकार्डसहित सहभागी भएका थिए।
भैरहवाका युवाले मौन प्रर्दशन
सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भैरहवाका युवाले मौन प्रर्दशन गरेका छन् । राष्ट्रिय झण्डासहित स्वतस्र्फूत रुपमा उत्रिएका युवाले मौन रहेर पनि प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । शान्तिपूर्ण रुपमा प्रर्दशन गरेका उनीहरुले कुनै किसिमको नाराबाजी गरेनन् ।
भैरहवाको बुद्धचोकबाट निकालिएको जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर भौतिक दुरी कायम गर्दै उनीहरु धर्नामा बसेका हुन ।
बुटवलमा पनि युवाहरुले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन
बुटवलमा पनि युवाहरुले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललको कार्यालय अगाडी धर्ना दिने र सरकार विरुद्ध नारवाजी गर्ने उद्देश्य रहेपनि विफल वनाउन बुटवल वजारमा वाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
यस्तै भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि व्यापक प्रदर्शन भएको छ । सल्लाघारीमा बाटोको दायाँ वायाँ जम्मा भएर स्थानिय यूवाहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । धुलिखेल, गोरखा र उदयपुरमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।
#१० अर्बको हिसाव खोज्दै देशैभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन